Dalabyo Waali Ah Oo Uu Kylian Mbappé Ka Doonayay Maamulka Kooxdiisa PSG Markii Ay La Soo Wareegaysay Oo Uu Football Leaks Shaaciyay. – GOOL24.NET
Dalabyo Waali Ah Oo Uu Kylian Mbappé Ka Doonayay Maamulka Kooxdiisa PSG Markii Ay La Soo Wareegaysay Oo Uu Football Leaks Shaaciyay.
Mudooyinkii ugu danbeeyay sir fashiliyaha Football Leaks ayaa ciwaano waa wayn kubbada cagta kaga abuuray siro badan oo uu banaanka soo dhigay kuwaas oo aanu qaybo badan oo ka mid ah idiinku soo gudbinay dhacdooyinkii hore loo shaaciyay laakiin waxaa wali sii socda soo bandhigida xaqiiqooyin dahsoonaa balse hadda la soo bandhigay.
Waxaanu hore idiinku soo gudbinay lacagihii waalida ahaa ee ay Real Madrid ku doonaysay saxiixa Kylian Mbappé taas oo uu Football Leaks ku shaaciyay 214 milyan oo waliba 180 milyan ka mid ah si toos ah gacanta looga galinayay kooxdiisii hore ee AS Monaco laakiin sheekadu hadda waxay u jeesatay PSG.
Markii uu Kylian Mbappé ku biirayay kooxda PSG ee uu iska diiday dhamaan kooxihii kale waxa uu maamulka kooxda PSG ka dalbaday waxyaabo layaableh oo uu ku doonayay in uu uga faa’iidaysto xiisihii waalida ahaa ee kooxaha Yurub ugu waa wayn oo dhan uga imanayay.
Ugu horayn qoyska Kylian Mbappé oo waliba haddana ahaa wakiilkiisa ayaa PSG ka dalbaday in heshiiska uu kooxda 18 sano jirkani ugu biirayay lagu daro qodob isaga u ogolaanaya in uu PSG si sahlan kaga baxo haddii UEFA ka saarto tartanka Champions League.
Waqtiga uu Kylian Mbappé ku biirayay kooxda PSG waxaa jiray shaki ahaa in PSG laga saaro UEFA Champions League maadaama oo ay lacag waali ah kula wareegtay Neymar Jr oo ahayd 222 milyan euros, waxayna Kylian Mbappé iyo qoyskiisu dalbadeen in heshiiskiisa lagu daro qodob u ogolaanaya in uu kooxda ka bixi karo haddii PSG laga saaro Champions League.
Qodobka labaad ee cajiibka ah ee uu Kylian Mbappé ka dalbaday maamulka kooxdiisa PSG ayuu Football Leaks ku shaaciyay in uu ahaa dalab ku xidhan abaal marinta Ballon d’Or ee uu haddaba Mbappe qaybta ka yahay 30 ka musharax ee u taagan.
Kylian Mbappé ayaa dalbaday in si toos ah looga dhigo xidiga ugu mushaarka badan PSG haddii uu ku guulaysto abaal marinta Ballon d’Or isaga oo markaas kooxda u saxiixay heshiis shan sano ah oo qiimihiisu dhamaa 50 milyan euros.
Kylian Mbappé ayaa doonayay in haddii ay dhacdo maalin uu ku guulaysto Ballon d’Or in uu noqdo shaqisga PSG ugu mushaarka badan isaga oo waliba doonayay in uu xataa Neymar oo 30 milyan euros sanadkii qaata in uu ka sare maro halka uu hadda si wayn uga hooseeyo.
Qodob kale ee layaabka leh ee uu Kylian Mbappé ka dalbaday kooxda PSG ayaa lagu sheegay in uu doonayay lacag u dhiganta 50 saacadood duulimaadkood kaas oo ah kharashka ku baxyaa ilaaladiisa, shaqaalihiisa iyo dadka ka agdhaw laakiin maamulka PSG ayaa ogolaaday in la siiyo 30,000 un oo euros sanadkiiba iyada oo aan la fulin dalabkan waalida ah ee uu miiska soo saaray.
Waxyaabaha kale ee sir faafiyaha Football Leaks uu ka shaaciyay heshiiskii Kylian Mbappé ee PSG waxaa ku jira in aabaha dhalay Mbappe ee Wlifrid in uu maamulka kooxda PSG ka dalbaday in uu ka soo qayb gali karo tababarka kooxda kowaad ee PSG taas oo ay boodhka PSG iska diideen.